Filazana Ofisialy Ny Fifidianana Ny Filankevi-pitantanan’ny Global Voices ! · Global Voices teny Malagasy
Filazana Ofisialy Ny Fifidianana Ny Filankevi-pitantanan'ny Global Voices !
Voadika ny 15 Marsa 2017 4:45 GMT
Vakio amin'ny teny polski, عربي, Français, English
Tonga indray ny vanimpotoanan'ny fifidianana ny filankevi-pitantanan'ny Global Voices!
Mamita ny fotoam-pitantanany telo taona amin'ny faran'ny volana Martsa 2017 ireo solontenatsika ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny Global Voices amin'izao fotoana izao, Aparna Ray, Jillian York (ho an'ny mpiasa an-tsitrapo) ary Mohamed ElGohary (ho an'ny mpiasa raikitra): noho izany mila mifidy olona telo vaovao mba hisolo azy ireo.
Taorian'ny fifidianana tamin'ny 2014, maro taminareo no nandefa sosokevitra ary nanome hevitra momba ny dingana, toy ny vanim-potoanan'ny fifidianana lavalava kokoa sy ny fepetra tsy dia hentitra loatra handraisana ireo mpifidy. Noraisinay ireny hevitra ireny fony izahay namaritra ny dingana tamin'ity taona ity.
Tsotra kokoa ny manome ny andinindininy amin'ny endriny FAQ (fanontaniana sy valiny): ndao ary:
FANDAHARAM-POTOANA SY TOMPON'ANDRAIKITRA
RAHOVIANA NO HATAO NY FIFIDIANANA MANARAKA ?
Hatao ny 16 hatramin'ny 20 martsa 2017 ny fifidianana. Toy izao ny fandaharam-potoanan'ny hetsika mifandray amin'ny fifidianana :
28 febroary – Andro farany fametrahana ny filatsahana ho fidiana
2 martsa – Filazana ny filatsahana ho fidiana
3-15 martsa - Vanim-potoanan'ny fampielezan-kevitra
16-20 martsa – Fifidianana !
21 martsa – Filazana ny voka-pifidianana
25 martsa – Fiodinana faharoa (raha ilaina)
IZA NO TOMPON'ANDRAIKITRY NY FIFIDIANANA SY NY FANISANA NY VATO ?
Nanendry an'i Ivan Sigal sy i Georgia Popplewell ny filankevitra, midika koa izany fa tsy hanana zo hifidy i Ivan sy Georgia.
AHOANA NO HISAFIDIANANA IZAY MPANDRESY ?
Izay kandidà mahazo vato betsaka indrindra no mandresy amin'ny fifidianana ny solotenan'ny mpiasa. Ny mpandresy amin'ny fifidianana ny solontenan'ny mpirotsaka an-tsitrapo dia ireo kandidà roa izay hahazo ny vato betsaka indrindra.
FA INONA ITY FILANKEVI-PITANTANAN'NY GLOBAL VOICES ITY ?
Toy ny fikambanana rehetra tsy mitady tombony ara-bola, tarihin'ny filankevi-pitantanana (CA) ny Global Voices . Afaka jerenao ato amin'ity pejy ity ny lisitry ny mpikambana amin'izao fotoana izao : https://globalvoices.org/about/board-of-directors/.
INONA NO RAFITRY NY FP (FILANKEVI-PITANTANAN)'I GLOBAL VOICES ?
Toerana sivy no mamorona ny FP amin'izao fotoana izao. Roa natokana ho an'ny mpanorina ny Global Voices, Ethan Zuckerman sy i Rebecca MacKinnon, telo ho an'ny mpikambana avy amin'ny vondrom-pikambanana ary efatra ho an'ny olona hafa nosafidian'ny FP.
IM-PIRY MIVORY NY FP ?
Mivory indray mandeha isan-telo volana ny FP, izany hoe in'efatra isan-taona. Ny ankamaroan'ny fivoriana dia amin'ny alalan'ny velakevitra ifanaovana amin'ny alalan'ny fifandraisana an-tsary mivantana (video-conférence)
AHOANA NO ATAO MBA HO ANISAN'NY FP -N'NY GLOBAL VOICES ?
Fidian'ny FP amin'izao fotoana izao sady tendreny ireo mpikambana efatra. Ireo solontenan'ny vondrom-piarahamonin'ny Global Voices dia fidian'ny vondrom-piarahamonina.
IZA IREO SOLONTENA AMIN'IZAO FOTOANA IZAO ?
Ny toeran'ny solontena dia misy an'i Mohamed ElGohary (solontenan'ny mpiasa), Aparna Ray sy i Jillian C. York (solontenan'ny mpirotsaka an-tsitrapo). Voafidy ho ao amin'ny FP tamin'ny martsa 2014 izy ireo.
HAFIRIANA NO FAHARETAN'NY FOTOAM-PIASAN'NY MPIKAMBAN'NY FP ?
Telo taona no faharetan'ny fotoam-piasan'ny mpikamban'ny FP rehetra, ankoatry ny mpanorina ny GV.
INONA AVY IREO ANDRAIKITRY NY SOLONTENAN'NY VONDROM-PIARAHAMONINA ?
Ny andraikitry ny solontenan'ny vondrom-piarahamonina miasa ao amin'ny FP dia ny hahazo antoka fa raisin'ny fikambanana an-tànan ny tombontsoan'ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonin'ny Global Voices. Izy ireo no mpitondra tenin'ny vondrom-piarahamonina eo anatrehan'ny FP: araka izany, tsy maintsy mifandray matetika amin'ny vondrom-piarahamonina izy ireo, mihaino tsara ary mahalala ny hevitrareo sy ny olanareo.
AFAKA FIDIANA INDRAY VE IREO SOLONTENA ?
INONA AVY IREO MASON-TSIVANA HISAFIDIANANA NY KANDIDA ?
Afaka milatsaka ho fidiana ho solontenan'ny mpiasa ny mpikambana iray ao amin'ny vondrom-piarahamonina raha:
1) mitarika ny sampan'ny Global Voices izy (toy ny Newsroom, Rising Voices, Advox na Lingua) na ekipanà mpanoratra na mpandika teny (ohatra ireo mpandika teny isam-paritra na araka ny fiteny, na ireo mpandika tenin'ny tranonkala Lingua)
2) efa nandefa lahatsoratra tamin'ny iray amin'ireo tranonkalan'ny Global Voices, fara fahakeliny in'efatra tamin'ny taona lasa (izany hoe nanomboka tamin'ny 16 febroary 2016).
Afaka mirotsaka ho fidiana amin'ny toeran'ny solontenan'ny mpirotsaka an-tsitrapo ny mpikambana iray raha:
1) tsy mitarika ny iray amin'ireo sampan'ny Global Voices (toy ny Newsroom, Rising Voices na Lingua) na andianà mpanoratra na mpandika teny
2) efa nandefa lahatsoratra tamin'ny iray amin'ireo tranonkalan'ny Global Voices fara fahakeliny in'efatra tamin'ny taona lasa (izany hoe nanomboka tamin'ny 16 febroary 2016).
IZA NO AFAKA MANENDRY NY KANDIDA ?
Ny olona rehetra izay efa nandefa lahatsoratra, fara-fahakeliny indray mandeha, ary na tamin'ny fotoana inona na tamin'ny fotoana inona, ho an'ny Global Voices dia afaka manendry kandidà.
AHOANA NO AHAFAHAKO MANENDRY OLONA IRAY ?
Amin'ny alalan'ny fampiasana ity : https://docs.google.com/forms/d/1y5KhQFvb1Gjp2l0yr0AId8dAs7UQT7ZOsi_qTEJYgUs/edit
Tokony ho azonao antoka aloha fa manaiky hirotsaka ny olona atolotrao !
AFAKA MANENDRY TENA VE NY KANDIDA ?
Eny tokoa !
AHOANA NY FOMBA ITONDRAN'NY KANDIDA NY FAMPIELEZAN-KEVINY ?
Tsy maintsy mamaly andianà fanontaniana voafaritra mialoha ao amin'ny bilaogin'ny vondrom-piarahamonina aloha ireo kandidà (afaka jerenao ao anatin'ireto rohy roa ireto ny valinten'ny sokajinà kandidà roa tamin'ny 2014). Afaka mandefa ao ny fitaovana rehetra azo ekena hanaovana ny fampielezankevitra izy ireo, toy ny lahatsary, sary, rakipeo sns. Asaina araka izany àry ny mpikamban'ny vondrom-piarahamonin'ny GV mba hametraka ny fanontaniany amin'ireo kandidà ao amin'ny loabary an-dasin'ny vondrom-piarahamonina, na any amin'ny fanamarihana any amin'ny bilaogy. Raha tsy manana kaonty ianao, mangataha amin'ireo mpanoratrareo na any amin'ny mpitantana ny Lingua.
AFAKA MAMPIASA NY LISITRY NY FANAPARIAHANA ANANAN'NY GV VE IREO KANDIDA MBA HANAOVANY FAMPIELEZANKEVITRA?
Eny, afaka hampiasa ny vondrona Google GV-Community ireo kandidà ho an'ireo filàny amin'ny fampielezankevitra, rehefa mazava tsara fotsiny ireo fifandraisana amin'ny fampilezan-kevitra, amin'ny fametahana ny fanamarihana “Hafatra Fampielezankevitra GV” amin'ny imailaka .
METY HIHINTSANA VE NY KANDIDA IRAY ?
Izay kandidà rehetra mamono, manimba na manelingelina na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana ny fampilezankevitry ny kandidà iray amin'ny alalan'ny fitaovana, na mampanao izany olona hafa amin'ny anarany, dia mihintsana avy hatrany. Mazava loatra, mino sy mahatoky izahay fa tsy misy hanao toy izany ny olona ato amin'ny Global Voices 🙂
INONA AVY NY MASONTSIVANA HANDRAISANA MPIFIDY ?
Ny mpikambana rehetra ato amin'ny Global Voices izay 1) efa mpikambana fara fahakeliny nandritra ny telo volana ary 2) efa nandefa lahatsoratra tamin'ny iray amin'ireo tranonkalan'ny Global Voices tao anatin'ny dimy taona lasa (izany hoe hatramin'ny 01 janoary 2012). Atsy ho atsy dia ho avoakanay ny lisitry ny afaka mifidy.
AHOANA NY FOMBA FIFIDIANAN'NY MPIFIDY ?
Afaka mifidy ao amin'ny sehatra iray ao amin'ny aterineto ianao. Halefanay aminao ny vaovao sy ny toromarika amin'ny antsipirihany amin'ny fifidianana.
SADY HIFIDY NY SOLONTENAN'NY MPIASA VE IZANY NO HIFIDY NY SOLONTENAN'NY MPILATSAKA AN-TSITRAPO NY OLONA REHETRA ?
Eny. Raha ny marina, mikarakara fifidianana roa indray miaraka izahay, ny iray hifidianana ny solontenan'ny mpiasa, ary ny iray hafa hifidianana ireo olona roa hisolo tena ny mpilatsaka an-tsitrapo. Ny mpifidy tsirairay izany dia hanana fifidianana telo hatao.